माओवादीले हत्या गरेका आफ्ना नेताहरूको स्मृतिमा एमालेले गर्‍यो 'स्मृति सभा' ! - Updatekhabar.com Updatekhabar.com
माओवादीले हत्या गरेका आफ्ना नेताहरूको स्मृतिमा एमालेले गर्‍यो ‘स्मृति सभा’ !
काभ्रे । एमाले नेता एवं तत्कालीन रयाले गाविसका निर्वाचित गाविस अध्यक्ष केपी सापकोटा र एमाले नेता सिंहवीर तामाङको १९ औँ स्मृति सभा सम्पन्न भएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा कथित जनयुद्ध सञ्चालन गरेको माओवादीको प्रमुख निसानामा जनतामा स्थापित कम्युनिस्ट नेताहरू परिरहेको सन्दर्भमा आजभन्दा १९ वर्ष अगाडी आफ्नै घरमा सुतिरहेका नेकपा एमालेका नेता तथा गाविस अध्यक्ष केपी सापकोटाको अपहरण गरी निर्मम एवं कायरता पूर्वक हत्या गरेको थियो भने सोही आसपासमा एमाले सदस्य एवं बुद्धिजीवी सि‌हबिर तामाङको पनि माओवादीले हत्या गरेको थियो ।
आज उक्त हत्या काण्डको १९ वर्ष बितेको सन्दर्भमा सहिद भूमिको रूपमा चिनिएको रयालेमा बन्दै गरेको सहिद स्मृति पार्कमा सहिद केपी सिंहवीर स्मृति सभा सम्पन्न भएको हो । सहिद केपी र सिंहवीरको तस्बिरमा माल्यार्पण सहितको सभाले सहिदले देखेको सपना र देखाएको बाटोमा लाग्दै समृद्ध रयाले निर्माणमा एक भएर लाग्ने वक्ताहरूले बताउनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा पनौती नगरपालिका प्रमुख भीम न्यौपानेले समाजमा आतङ्क फैलाएर जनप्रिय योद्धाहरूको हत्या गर्दैमा उहाँहरुले बोकेको बिचार र सङ्कल्पको हत्या गर्न नसक्ने बताउनु भएको थियो । त्यस्तै अन्य वक्ताहरूले सहिद केपी सापकोटा र तामाङको बारेमा भोगाइ र स्मरण सहितका मन्तव्य राख्दै केपी सापकोटाको हत्याले बिहावर भेगकै अभिभावक गुमाएको बताउनु भएको थियो ।
कार्यक्रम सहिद स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष राजकुमार सापकोटाको सभापतित्व र पनौती नगरपालिका प्रमुख भीम न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा पनौती नगर उपप्रमुख गीता बन्जारा, वडा अध्यक्ष गुणनाथ सापकोटा, किशोर थापा, पुरुषोत्तम अधिकारी लगाएको आतिथ्य रहेको थियो ।